Marka aad qabtid iPhone ah in aad gacanta, waa in aad rabto in aad u hagaagsan oo Lugood, Outlook, Google, computer, Facebook, Yahoo !, iwm xogta kala iibsiga. The Talooyin iyo tabaha halkan aad xal u fudud in ay u maareeyaan. Iska akhriso waxyaabaha ku bidixda iyo aad u hesho waxa aad doonayso.
Sida loo hagaagsan music ka Lugood si iPhone
Ma ku kaydsan boqolaal kun oo heeso maktabadda Lugood oo aad rabto inaad u hagaagsan in iPhone? Ma noqon kartaa fudud. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso laba hab oo si hagaagsan music Lugood si iPhone. Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan Lugood, kan kale caawinaad ka ah qalab xisbiga saddexaad weydiinaya - TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) .
Habka 1. nidaameed music inay iPhone la Lugood
Habka 2. nidaameed music ka Lugood si iPhone oo ka iPhone in Lugood leh TunesGo
Tallaabada 1. Lugood Run on your computer iyo xiriiriyaan iPhone in computer deeruhu in cable USB ah.
Tallaabada 2. Tag galeeysid bidix ee Lugood, oo guji aad iPhone si ay u muujiyaan guddi gacanta ay xaq.
Tallaabada 3. On the midig, guji Music tab. Markaas sax nidaameed Music . Dooro maktabadda Dhan music ama playlists soo xulay, fannaaniin, albums, iyo qaybaha .
Tallaabada 4. Tag geeska hoose ee midigta iyo guji codso .
Fiiro gaar ah: Waa in aad xaqiiqsato in marka syncing music Lugood si iPhone, hadal soo booda aad u sheegay in ay ka saari doonaan xog ku saabsan iPhone hor syncing.
Wax macno ah ma haddii xogta ku saabsan iPhone sidoo kale waa in Lugood. Si kastaba ha ahaatee, haddii xogta ku saabsan iPhone yihiin asalka ah, oo aan ku Lugood, waxaad khasaari doonaa xogta weyn ka dib markii syncing. Si looga hor, waxaad ka ah qalab dhinac saddexaad taageero fiican sawiri lahaa. Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) waa mid ka mid ah kugu habboon.
Music nidaameed ka iPhone in Lugood, maleh haddii ay soo iibsatay ama ma.
Hagaagsan music Lugood si iPhone la sii haysashada wax walba oo ku saabsan iPhone.
Ka dhig info music buuxa, oo ay ku jiraan ratings, qashanka, xisaab play, iwm
Tallaabada 1. Connect iPhone in computer iyo ordi TunesGo
Download iyo rakibi Wondeshare TunesGo kombiyuutarka. Isticmaal cable USB ah si aad u hesho iPhone xiran kombiyuutarka. Marka xiran si guul ah, aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Si loo hubiyo in si sax ah Wondershare TunesGo ka shaqeeya, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood kombiyuutarka aad. Ka sokow, qoraalkii Windows iyo Mac dhow shaqeeyo isku mid. Sidaas darteed, waxaan qaadan version Windows sida tusaale.
Tallaabada 2. songs nidaameed ka Lugood si iPhone
Tag galeeysid bidix, guji playlist. Riix saddexagalka hoos Add . Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax wada hadal ah, kaas oo dhan playlists maktabadda Lugood waxaa lagu muujiyey. Dooro playlists aad doonayso iyo riix OK . Markaas, playlist iyo heeso maktabadda Lugood la synced doonaa iPhone.
Tallaabada 3. nidaameed iPhone music in Lugood
Si ka duwan Lugood, Wondershare TunesGo kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u hagaagsan iPhone music iyo playlists in Lugood maktabadda, maleh haddii ay soo iibsatay ama ma.
In uu furmo suuqa hoose, guji kaliya Si Lugood > Start > nuqul Lugood si hagaagsan music iyo playlists in Lugood. The heeso hore u maktabadda Lugood ee hadda jira waxaa lagu sifeeyay doonaa, si aanay u baahan tahay in aad walwasho ku saabsan tus ah.
Ka sokow toobiye ah, waxa kale oo aad u tegi kartaa Media iyo playlist on galeeysid bidix si ay u hagaagsan iPhone music iyo playlists maktabadda Lugood.
Talooyin ku takhalusid iPhone
Sida loo hagaagsan sawiro ka Lugood si iPhone
Way fududahay in la hagaagsan sawiro si iPhone la Lugood. Lugood yahay oo dhan aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay in ay ogaadaan in mar walba oo aad u hagaagsan sawiro ka Lugood si iPhone, kuwa hadda jira ee aad iPhone laga saari doonaa. Taasi micnaheedu waa in, waxaa laga yaabaa inaad gasho khasaare sawir ka dib u hagaagsan sawir.
Si kastaba, si hagaagsan sawiro si iPhone, waxaad kala socon kartaa tutorial ah:
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan Lugood kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah. Marka xiran si guul ah, aad iPhone la soo bandhigi doonaa khaanadda tagay.
Tallaabada 3. Samee gal on your computer iyo nuqul oo si paste aad sawiro doonayo.
Tallaabada 4. In Lugood ah, guji si aad iPhone si ay u muujiyaan guddi gacanta ay. Markaas, guji Photos .
Tallaabada 5. Sax nidaameed Photos ka . Browse computer si aad u ogaato iyo dooran folder sawir aad u diyaariyey.
Tallaabada 6. In geeska hoose ee midig, guji codso inuu ku soo bilowdo photos syncing ka Lugood si iPhone.
Sida loo hagaagsan videos iyo ka iPhone
Waxay leeyihiin qaar ka mid ah video clips xiiso leh oo ku saabsan iPhone oo aad rabto inaad u hagaagsan in aad iPhone u madadaalada? Ka dib u dhiska maktabadda Lugood aad, aad qorshaynaysid in aad u hagaagsan filimada iibsaday ka iPhone in Lugood? Waxba ma ahan wixii aad doonayso in aad qabato, halkan jawaab aad ka heli karto.
Qaybta 1. nidaameed video inay iPhone la Lugood
Qaybta 2. nidaameed video ka iPhone in Lugood
Tallaabada 1. Open Lugood iyo guji Movies bidixda. Movies ka sokow, waxa kale oo aad soo dhoofsadaan karaan ay muujinayso TV, podcasts iyo kuwa kale. Halkan, waxaan movie qaado sida tusaale.
Tallaabada 2. Tag File iyo in ay hoos u soo dejiyey menu, dooran dar File inay Library ... si ay u dajiyaan filimada aad jeceshahay in Lugood Library.
Tallaabada 3. koronto ee cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer. Ka dib markii ay ku xiran, aad iPhone tusi doonaa hoos AALADAHA .
Tallaabada 4. Guji si aad iPhone inay soo qaadaan guddi gacanta ay. By gujinaya Movies , waxaad ka heli suuqa kala syncing filimka.
Tallaabada 5. Sax nidaameed Movies iyo dooran filimada aad doonayay. Markaas, waxaad tagtaa geeska hoose ee midigta iyo guji codso .
Fiiro Gaar ah: Iyada oo hagaagsan Lugood, xogta jira aad iPhone laga saari doonaa. Sidaa darteed, si taxadar leh u maleynayaa in ay ka hor filimada iPhone syncing la Lugood.
Tallaabada 1. Run Lugood on your computer oo guji Store > ogolaato Computer Tani ... . Buuxi ID Apple iyo password aad.
Tallaabada 2. Iska aad iPhone xiran cable USB ah. Markii uu na tusay in column ka tagay, waxa uu xaq u riix. In menu hoos-hoos, dooran Iibsasho Transfer .
Tallaabada 3. Sug inta uu hannaanka syncing la soo gabagabeeyo.
Fiiro gaar ah: In sidan, aad ogol yahay in ay si fudud u hagaagsan iPhone iibsaday video in Lugood. Si kastaba ha ahaatee, sida kuwa aan ku iibsaday, waxaad u leedahay in aad kaalmo ka qaar ka mid ah qalab xisbiga saddexaad weydii.
Sida loo hagaagsan iPhone in PC
Marka ay timaado in syncing iPhone in computer, waxaad ku qor karaa sababo badan. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli computer cusub waxa kaliya oo aad rabto in aad u hagaagsan xogta on your computer iPhone si loogu ammaanka. Ama, waxaad xogta on your computer lumay ay sabab u tahay shil computer, nidaamka reinstallation, ama kuwa kale. Wax kasta oo sabab u yahay, waan hubaa, waxa ugu muhiimsan waa sida ay u hagaagsan iPhone in computer.
Sida aad ka arki, Lugood waa software u hagaagsan hal jid, taas oo kaliya in aad ogolaanaysaa xogta u hagaagsan in iPhone, jid ku wareegsan oo kale ma. Sidaas darteed, si ay u maareeyaan, waxaad u baahan tahay xoogaa gargaar ah. Wondershare MobileTrans Ama Wondershare MobileTrans u Mac yimaado anfacaya. Macna ma laha hadii aad rabto in aad u hagaagsan iPhone in computer cusub ama computer kale, waxay samayn kartaa in aad u.
In qayb hoose, waxaan diiradda saaraan syncing iPhone in PC. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, fadlan tag waxyaabaha uu ka tagay oo guji nidaameed iPhone si Mac.
iPhone in software PC nidaameed
Hagaagsan audio, video, sawiro iyo fariimaha ka iPhone in PC 1 click.
Xiriirada nidaameed ee iPhone ee xasuusta, iCloud, Gmail, Yahoo! oo dheeraad ah si ay u PC.
Soo Celinta iPhone la xogta synced in PC waqti kasta.
La jaan qaada iPhone 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS.
Tallaabada 1. Orod software kombuutarka
Marka ugu horeysa, dejisan iyo gashato kombuutarka. Waxa maamula. Marka ay suuqa kala hoose muujinaysaa ilaa, u tag kaabta iyo Soo Celinta hab oo guji kaabta.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood si loo hubiyo in software taasi waxa ay caadiyan ka shaqeeya.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in PC via cable USB
Ka qaada ah cable USB Apple in ay ku xidhmaan aad iPhone in PC. Software Tani waxay ogaan doonaa iPhone sida ugu dhaqsaha badan. Markaas, aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa column bidix.
In dhexe ee suuqa, dooran content aad rabto in aad u hagaagsan. Waxaad u hagaagsan kartaa music, video, sawiro, fariimo iyo xiriirada ku iPhone in PC waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Podcasts, bandhigyada TV, Lugood U sidoo kale la synced doonaa music iyo video.
Tallaabada 3. nidaameed iPhone in PC
Guji Start Copy iyo softwrae this bilaabo inuu u hagaagsan xogta iPhone in PC. U hubso in aad iPhone waxaa mar walba ku xiran.
Sida loo hagaagsan xiriirada Yahoo! iyo jadwalka la iPhone
Si aad u hagaagsan Yahoo! xiriir la iPhone, waxaad qaadan kartaa talaabooyinka soo socda.
Tallaabada 1. Tubada Settings aad iPhone in ay galaan dejinta shaashadda. Tubada Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Tallaabada 2. Tubada dar xisaabta iyo dooran Yahoo!
Tallaabada 3. Buuxi macluumaadka account Yahoo!, oo ay ku jiraan, magacaaga, email, password, description.
Tallaabada 4. Tubada Next dibna ugu noqda Xiriirada iyo Kalandarada . Tubada Save .
Tallaabada 5. Waa sida ay si hagaagsan jadwalka Yahoo! oo xiriir la leh iPhone.
Sida loo hagaagsan iPhone in Android oo u hagaagsan Android inay iPhone
Just iska ilaawaan hore iPhone waayo telefoonka ah Android, sida Samsung S5, oo aad rabto inaad u hagaagsan xiriirada iPhone in Android? U bood markabka si iPhone 5s, kaliya si aad u ogaato in dhammaan dadka ay khuseyso ayaa weli ku xayiran telefoonka Android? Ha welwelin. Maleh haddii aad rabto in aad u hagaagsan xiriirada ka Android inay iPhone ama ka iPhone in Android, halkan waa hab ka baxay.
Xiriirada nidaameed ka Android inay iPhone, iyo ka iPhone si fudud Android.
Fariimaha nidaameed, music, video iyo sawiro muuqan.
Xiriirada Import / dhoofiyo / ka VCF, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book.
Beddelaan audio leheyn iyo video inay iPhone / Android qalab qaabab saaxiibtinimo.
Si fiican u shaqeeyaan iPhone 3GS / 4s / 4/5 / 5s / 5c macruufka socda 5/6/7.
Tallaabada 1. Daahfurka software-ka kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, download iyo rakibi Windows ama Mac version on your computer. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'focus on version Windows ah. Users Mac fadlan raac tallaabooyinka la mid ah.
Orod software ah. In uu furmo suuqa hoose, u tag Phone in hab Phone adigoo gujinaya Start .
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo Android phone in computer
Bareesada in fiilooyinka USB ah si aad u hesho iPhone iyo Android phone xiran. Software Tan ugu dhakhsaha badan u aqoonsan doonaa, oo markaas aan u muujiyo in uu suuqa kala iibsiga telefoonka.
Si aad u hagaagsan xiriirada iPhone oo dheeraad ah si ay u phone Android, aad iPhone waa in lagu muujiyaa bidixda, iyo Android phone on xaq.
Si aad u hagaagsan xogta Android inay iPhone, waa in aad hubisaa in aad iPhone u muuqataa on xaq, oo Android phone bidixda sameeyo.
Tallaabada 3. nidaameed iPhone la Android
Dooro content aad rabto in aad u hagaagsan dhexe. Waad ogol yahay in ay u hagaagsan music, video, sawiro, xiriirada iyo fariimaha waqti 1 click. Markaas, riix Start Copy .
Sida loo hagaagsan iPhone in iPad
My saaxiib ugu fiican uun helay iPad cusub. Waxay leedahay iPhone ah in uu taageeray in iCloud ah. Ma fahmi karaa sida ay u hagaagsan info ka soo iPhone in iPad. Wax kasta oo kale oo la shaqeeya.
Syncing iPhone la iPad ma aha wax adag iCloud iyo Lugood waa mid caawisa oo adiga kuu wanaagsan. In qayb hoose, waxaan diiradda ku sheegaya sida loo isticmaalo iCloud si hagaagsan iPad la iPhone aad. Haddii aad jeceshahay adigoo isticmaalaya Lugood, fadlan riix halkan.
Tallaabada 1. aad iPhone, Daar network WiFi ah.
Tallaabada 2. Tubada Settings . On screen Settings ah, ka jaftaa iCloud . Saxiix in aad xisaabta iCloud.
Tallaabada 3. Tubada Kaydinta & kaabta iyo shid kaabta iCloud oo ka jaftaa OK . Markaas, ka jaftaa Back Up Now .
Tallaabada 4. Marka nidaamka gurmad dhamaato, hubi gurmad markii ugu dambeeyay si loo hubiyo in hab-socodka gurmad waa guul.
Tallaabada 5. aad iPad, raac tilmaamaha shaashadda. Dooro luqadda iyo dalka, go'aan ka gaarto in aad awood adeegyada maxaliga ah. Daar network WiFi ah.
Tallaabada 6. Marka ay timaado in aad u fidinno iPad, dooran Soo Celinta ka kaabta iCloud . Log galay ID Apple iyo password aad.
Tallaabada 7. Dooro gurmad ugu dambeeyay ee aad iPhone oo ka jaftaa soo celi. Sug ilaa kabashada la soo gabagabeeyo.
Waxaa sidoo kale waqti lumis in hagaagsan iPhone la iPad adigoo isticmaalaya iCloud? Non-iibsaday music iyo video on your iPhone aan la synced karaa in iPad sidan? Ha welwelin. Halkan waa hal-riix iPhone in iPad software u hagaagsan loo magacaabay Wondershare MobileTrans. Sidaa daraadeed, aad u hagaagsan kartaa music, video, sawiro iyo xiriirada ka iPhone in iPad ku haboon iyo si fudud.
Baro sida loo hagaagsan iPhone la iPad la Wondershare MobileTrans halkan >>
Sida loo hagaagsan iPod si iPhone
Ma ku kaydsan badan oo heeso aad iPod oo aan la sugi karin in ay u hagaagsan in iPhone? Iyadoo Lugood, aad u hagaagsan karaa heesaha oo dhan aad soo iibsatay ka iPod si iPhone. Ku socda iyada oo hanuunka fudud hoose.
Tallaabada 1. Run Lugood iyo guji Store . Markii calaamada menu jiido-down, guji Anthorize Tani Computer ... Gal account in aad isticmaasho si aad u iibsato music.
Tallaabada 2. Isku aad iPod in computer la cable USB ah. Marka la ogaado, aad iPod la soo bandhigi doonaa galeeysid bidix ee Lugood.
Tallaabada 3. midig u guji ama loo xakameeyo guji aad iPod si ay u helaan ay menu jiido hoos. Riix Iibsasho Transfer .
Tallaabada 4. Hadda, gabayadii iibsaday aad iPod waa in Lugood ah. Bareesada aad iPod iyo xiriiriyaan iPhone in computer.
Tallaabada 5. adigoo gujinaya aad iPhone, guddi gacanta ay u muuqataa on xaq. Riix Music . Sax nidaameed Music . Dooro maktabadda Dhan music ama playlists soo xulay, fannaaniin, albums, iyo qaybaha .
Tallaabada 6. Riix codso in ay u hagaagsan music iPod si iPhone.
Fiiro gaar ah: Sida aan kor ku soo sheegnay, Lugood u hagaagsan iibsan karaa music iPod si iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waa wax ay u hagaagsan song aan iibsaday ka iPod si iPhone samayn karaa. Taa ka sii daran, oo ay syncing, heesaha oo dhan ka jira ee aad iPhone bedeli doona kuwa ka iPod. Maxaa dhacaya haddii songs jira aad iPhone yihiin asalka ah? Waa maxay weyn gaartay in ay noqon doontaa!
Xaaladdan oo kale, ayaan kula talin hagaagsan software ah iPod si iPhone. Waa Wondershare MobileTrans (Windows) ama Wondershare MobileTrans u Mac . Sidaa daraadeed, waxaad leedahay awood ay ku hagaagsan audio oo dhan, video, xiriirada iyo sawiro ka iPod si iPhone la eber tayada khasaaro.
Baro sida loo sy nc iPod la iPhone adigoo isticmaalaya MobileTrans
> Resource > iPhone > A Guide Full on Sida loo hagaagsan iPhone